ဗဟုသုတ – Burmese Online News
လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ ညီတော်မောင် က သူငယ်သူငယ်ချင်း နဲ့ထိုင်နေတော့ မူခင်းဆရာဝန်ဖြစ်တဲ့ သူ့ငယ်ချင်းက ဆီကြော် မစားရဲဘူးလို့ ဆိုတယ်။ သူအလုပ်အရ သေတဲ့သူတွေကို ခွဲစိတ်စစ်ဆေးရတော့ သူပြောပုံအရ ဝတဲ့သူမှ မဟုတ်ဘူး မြန်မာ ပြည်မှာ အတော်များများ က အထဲမှာ ဆီတွေစုနေတယ်လို့ ဆိုတယ် အသည်းအဆီဖုံးတာမျိုး ကိုပြောတာလားတော့ မသိဘူးပေါ့။ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ဆီလျော့စားဖို့ ပြောနေကြတာလည်း ရှိတယ်။ တကယ်ပြန်ကြည့်ရင် ကျွန်တော်တို့ ငယ်ငယ်က လည်း ဒီလိုဆီပြန်စားခဲ့ကြတာပါဘဲ သို့ သော် ဆီဆိုတာက မြေပဲတွေ နှမ်းတွေက ကြိတ်တာ တွေစားတော့ အခုလိုမဖြစ်ဘူးပေါ့။ မှတ်မှတ် ရရ အရေးအခင်း အပြီးမှာ အစိုးရက မလေးရှားက စားအုန်းဆီတွေ စသွင်း တယ် သွင်းခါစက ပုံးနဲ့ ပေပါနဲ့ ဆီကို စားဖို့ သန့်ပြီးမှ လာတဲ့ဆီတွေ။...
ဖော်မလင် (Formalin) အကြောင်း သိကောင်းစရာ… ဒေါက်တာဒေါ်ဇင်ဇင်နွယ် ညွှန်ကြားရေးမှူး (အငြိမ်းစား) အစားသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေး ဦးစီးဌာန နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း Q. ဖော်မလင်အကြောင်း သိပါရစေ ဆရာမ။ A. ဖော်မလင်ဆိုတာ အရောင်အဆင်းမရှိ၊ အနံ့ပြင်းတဲ့ ဓာတုပစ္စည်း တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဖော်မယ်ဒီဟိုက် (formaldehyde)၊ မက်သနော (methanol)၊ ရေ (water) စုပေါင်းထားတဲ့ အရောအနှောတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဖော်မလင်အရည်မှာ ဖော်မယ်ဒီဟိုက် ၃၇ ရာခိုင်နှုန်း ပါဝင်ပါတယ်။ Q.. ဖော်မလင်ကို သဘာဝအားဖြင့် ဘယ်လိုနေရာတွေမှာ အသုံးပြုလေ့ရှိပါသလဲ ဆရာမ။ A. ဖော်မလင်ကို အဓိကအားဖြင့် လူသေတွေကို ကြာရှည်ခံအောင် စိမ်တဲ့နေရာမှာ သုံးပါတယ်။ ပြီးတော့- ပိုးသတ်ရာမှာ သုံးပါတယ်၊ ကြမ်းခင်းတွေ၊ အ၀တ်အစားတွေ၊ သဘောင်္တွေနဲ့ သိုလှောင်ရုံတွေကို သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ရာမှာ အသုံးပြုပါတယ်။ အင်းဆက်ပိုးတွေ၊ ယင်ကောင်တွေ နှိမ်နင်းရာမှာသုံးပါတယ်။...
မျိုးဆက် (၄) ဆက်တိုင်တိုင် မြန်မာတပြည်လုံး ဆယ်တန်းအမှတ် ပထမနေရာကို သိမ်းပိုက်ခဲ့ကြသူများ
မျိုးဆက် (၄) ဆက်တိုင်တိုင် မြန်မာတပြည်လုံး ဆယ်တန်းအမှတ် ပထမနေရာကို သိမ်းပိုက်ခဲ့ကြသူများ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲသည် ကြိုးစားသူများအတွက် အောင်မြင်ဖို့ သိပ်မခက်လှသော စာမေးပွဲဖြစ်သော်လည်း ဂုဏ်ထူးများ ပါဖို့ တော့ခက်ခဲလှသည်။ ထိုထက်ပို၍ တစ်နိုင်ငံလုံး အဆင့် ၁ မှ ၁၀ အထိ ဝင်ရန်မှာ အလွန်ပင်ခက်ခဲလှပြီး အဆင့် ၁ နေရာကိုရရန်အတွက်မှု မည်မျှခက်ခဲကြောင်း ပြော၍ မလိုတော့ပါ။ သို့သော် ထို နိုင်ငံလုံး အဆင့် ၁ နေရာကို မျိုးဆက်လေးဆက်တိုင်တိုင် (၅) ကြိမ် ဆက် ရရှိခဲ့သူများ ရှိခဲ့ဖူးသည်ဟု ဆိုလျှင် အလွန်အမင်းအံသြသွားနိုင်ပါသည်။ မသိသေးသူများအတွက် ထိုမိသားစု အကြောင်းကို ဗဟုသုတ အဖြစ်ဖော်ပြလိုပါသည်။ ဦးဟုတ်စိန် ယခင်က ဘင်္ဂလားစာမေးပွဲ (ခေါ်) ဆယ်တန်းစာမေးပွဲကို ၁၉၀၉ ခုနှစ်၌ စိန်ပေါလ်ကျောင်းမှ မောင်ဟုတ်စိန်က မြန်မာနိုင်ငံ...
ရေးသားသူ – မောင်သာ(ရှေးဟောင်းသုတေသန) မြန်မာနိုင်ငံသည် နယ်ချဲ့ ဗြိတိသျှတို့၏ အုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင် နှစ်ကာလ ရှည်ကြာစွာ နေခဲ့ရသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း၌ ကိုလိုနီခေတ်လက်ရာ လူနေအိမ်များ၊ ရုံးများ၊ ကျောင်းများ ၊ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းများ စသည်ဖြင့် ဗြိတိသျှခေတ်က တည်ဆောက် ခဲ့သည့် အဆောက်အအုံများစွာ ကျန်ရှိနေခဲ့သည်။ ယင်းတို့အနက် ဘာသာပေါင်းစုံ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းများကို ရန်ကုန်မြို့တွင် တွေ့မြင်နိုင်ကြသည့်အနက် ခရစ်ယာန်ဘာသာဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံများက အများဆုံးဖြစ်ပြီး ဟိန္ဒူ၊ အစ္စလာမ်၊ ဆစ်ခ်၊ ဂျူး အစရှိသည့် ဘာသာဝင်များ ဘုရားဝတ်ပြုသည့် အဆောက်အအုံများလည်း တည်ရှိနေပေသည်။ ယခုအချိန်တွင် ယင်းအဆောက်အအုံများသည် သက်တမ်းနှစ် ၁၀၀ ကျော်ခဲ့ပြီဖြစ်သဖြင့် ရှေးဟောင်းအဆောက်အအုံများ စာရင်းတွင် ပါဝင်လာခဲ့ကြသည်။ ရှေးဟောင်းအဆောက်အအုံ ဟူသည် ရှေးဟောင်း အဆောက်အအုံများ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေး ဥပဒေအရ မြေပေါ်၊ မြေအောက်၊ ရေပေါ် ရေအောက်တွင်ရှိ သည့် ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းများ...
ကမ္ဘာပေါ်ရှိ လူသတ်မှုတွေရဲ့ ၉၀ ရာနှုန်းလောက်က အမျိုးသားတွေ ကျူးလွန်ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပဲ နာမည်အကျော်ကြားဆုံး ကွင်းဆက်လူသတ်သမားတွေက အမျိုးသားတွေ ဖြစ်နေကြတာပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း နာမည်ကျော်တဲ့ အမျိုးသမီး ကွင်းဆက်လူသတ်သမားတွေလည်း ရှိနေပါသေးတယ်။ အများစုကတော့ အဆိပ်ကို လူသတ်လက်နက်အဖြစ် အသုံးပြုကြပါတယ်။ တစ်ချို့ ကွင်းဆက်လူသတ်သမားတွေဆိုရင် လူ ၁၀၀ ကျော်လောက်တောင် သတ်ပစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီ အမျိုးသမီး ကွင်းဆက်လူသတ်သမားတွေကို InsideHook ကနေ ဖော်ပြထားပါတယ်။ Aileen Wuornos သူမကို ၁၉၅၆ ခုနှစ်မှာ မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၈၉ ကနေ ၁၉၉၀ အတွင်းမှာပဲ အမျိုးသား ၇ ယောက်ကို သတ်ပစ်ခဲ့ပါတယ်။ The New York Daily News ရဲ့ သတင်းတွေအရ သူမက အကုန်လုံးကို သေနတ်နဲ့ပဲ ပစ်သတ်ခဲ့တာပါ။ ယာဉ် မတော်တဆမှု...
အင်္ဂါဂြိုဟ်ပေါ်မှာ နာဆာအဖွဲ့က လှည့်ပတ်ပျံဝဲမယ့် မောင်းသူမဲ့ရဟတ်ယာဉ်ကို ဦးဆောင်တီထွင်ခဲ့သူကတော့ မြန်မာလူမျိုး မိဘနှစ်ပါးကနေ မွေးဖွားလာခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာ ၁၀ နှစ်ကျော် နေထိုင်ခဲ့ဖူးတဲ့ ဒေါက်တာမိမိအောင်(Dr Mi Mi Aung)ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါက်တာမိမိအောင်ကို ၁၉၆၈ ခုနှစ်က အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ မွေးဖွားခဲ့ပြီး အသက် ၂ နှစ်ခွဲအရွယ်မှာ မိဘတွေရဲ့ ဇာတိမြေဖြစ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ပါတယ်။ ဒေါက်တာမိမိအောင်ရဲ့မိခင်ဟာလည်း မြန်မာနိုင်ငံသူတွေထဲမှာ သင်္ချာပညာရပ်ဆိုင်ရာ ပါရဂူဘွဲ့ ပထမဆုံး ရရှိခဲ့သူပါ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရုပ်ဝတ္တုပစ္စည်း မပြည့်မစုံနဲ့ လူလားမြောက်ခဲ့ရတဲ့ ဒေါက်တာမိမိအောင်ဟာ ကြယ်စုံတဲ့ကောင်းကင်ကြီးကို မကြာမကြာ ငေးကြည့်တတ်ပြီး ”အာကာသထဲမှာ ငါတို့လူသားတွေပဲ ရှိတာလား”လို့ စဉ်းစားခန်း ထုတ်နေတတ်ပါတယ်။ ” ရုပ်ဝတ္တုပစ္စည်း နည်းလေလေ ဒီကိစ္စအကြောင်းကို ပိုတွေးဖြစ်လေလေပါပဲ”လို့ ဒေါက်တာမိမိအောင်က ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်ကျောင်း အထက်တန်းကျောင်းသူဘဝကတည်းက အာကာသသိပ္ပံဘာသာရပ်ကို စိတ်ဝင်စားခဲ့တဲ့ ဒေါက်တာမိမိအောင်ဟာ...
မျိူးတုန်းသွားပြီ ဟုယူဆ ထားသော ကမ္ဘာ့ အကြီးဆုံး ပျားဘီလူးကို ပြန်လည် တွေ့ရှိ့ လူကြီးတစ်ယောက်၏ လက်မခန့် အရွယ်အစားရှိ့တဲ့ပျားတစ်ကောင်ကို အင်ဒိုနီးရှားကျွန်း ပေါ်မှာရှာဖွေတွေ့ရှိ့ခဲ့ပါတယ်။ရက်အနည်းငယ်ကြာရှာဖွေပြီးနောက်မှာ တောရိုင်း တိရစ္ဆာန် ပညာရှင်တွေက တစ်ကောင်းတည်းဖစ်နေတဲ့ ပျားမကိုတွေ့ရှိ့ခဲ့တာပါ။ထိုပျားကို1858ခုနှစ်မှာဗြိတိသျှသဘာဝနှင့်စူးစမ်းရှာဖွေသူ Alfred Russell Wallace ကရှာဖွေတွေ့ရှိ့ခဲ့ပြီး Wallace’s beeလို့နာမည်တွင်ခဲ့တာပါ။ သိပ္ပံပညာရှင်တွေက 1981တုန်းကလဲ အင်ဒိုနီးရှားကျွန်း ၃ကျွန်းပေါ်မှာ ထိုပျားရဲ့ နမူနာအများအပြားကိုတွေ့ရှိ့ပြီးပါပြီ။မနှစ်ကOnlineကနေရောင်းချဖို့ကမ်းလှမ်းထားခဲ့တဲ့ ပျားနမူနာ၂ခု့ဟာလဲ အသက်ရှင်မနေတဲ့နမူနာတွေပဲဖစ်ပါတယ်။Januaryမှာ အသင်းတစ်သင်းဟာ ထိုပျားကိုရှာဖွေပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်ယူဖို့အတွက် Wallace ရဲ့ အင်ဒိုနီးရှားခရီးကို ခြေရာခံလိုက်ခဲ့တာပါ။ထိုပျားဟာရိုးရိုးသာမာန်ပျားတွေထ အလွန်ကိုကြီးမားပါတယ်။ “ကျွန်တော်တို့ မျိူးမတုန်းသေးဘူးဆိုပြီး မရေရာတော့တဲ့ ခွေးဘီလူးပျံကြီးကို ကျွန်တော်တို့မျက်မှောက်မှာ မျက်ဝါးထင်ထင်ကြီး ကြည့်ရတာဟာ အရမ်းကို ရင်သပ်အံ့သြ ဖွယ် ပါပဲ။”ဟု ထိုပျားကိုသက်ရှိထင်ရှား ဓာတ်ပုံပထမဆုံးရိုက်ခဲ့တဲ့ သဘာဝသမိုင်းဓာတ်ပုံဆရာ Clay Bolt ကဆိုပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးသူက “သက်ရှိ့ထင်ရှားပျားကြီးဟာ ဘယ်လောက်ကြီးမားပြီးဘယ်လောက်လှပတယ်ဆိုတာရယ် ကျွန်တော့်ဦးခေါင်းနားကပျံဝဲသွားပြီးသူ့ရဲ့အသံကိုကြားခဲ့ရတာတွေဟာ...
ရောင်းစားဖို့ ကားပေါ်ပါသွားတဲ့ သူငယ်ချင်းနွားနောက် ကို တောက်လျှောက်လိုက်ခဲ့တဲ့ နွားလေး။ လူတော်တော်များများက တိရစ္ဆာန်တွေဟာ အဟိတ်တိရစ္ဆာန်ဖြစ်တာကြောင့် အသိဉာဏ်နဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ မရှိနိုင်ဘူးလို့ ထင်နေကြပုံပါပဲ။ တစ်ကယ်တမ်းတော့ သက်ရှိအရာမှန်သမျှမှာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာဆိုတာ ရှိပါတယ်။ ဒါကို သက်သေပြသွားတာကတော့ နွားကလေးတစ်ကောင်နဲ့ ကျွဲကလေးတစ်ကောင်ပါပဲ။ ပိုင်ရှင်ဟာ ငွေလိုတာကြောင့် သူ့ရဲ့နွားကို ရောင်းဖို့ ကားပေါ်ဆင်ပြီးမောင်းထွက်သွားတဲ့ အနောက်ကို သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ ကျွဲကလေးဟာ အဆိုကားနောက်ကနေ တစ်ကောက်ကောက်လိုက်ခဲ့ကြောင်း Storypickသတင်းဌာနရဲ့ ဖော်ပြချက်အရ သိရှိရပါတယ်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ Madurai ပြည်နယ်ရှိ Palamedu မြို့မှာ ကြေကွဲဝမ်းနည်းဖွယ်ရာ အဖြစ်အပျက်တစ်ခု ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါမြို့မှာ နေထိုင်သူ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ပိုင်ရှင် Muniandiraja လို့ အမည်ရတဲ့ အမျိုးသားတစ်ယောက်ဆီမှာ နွားတစ်ကောင်နဲ့ ကျွဲတစ်ကောင် ရှိပါတယ်။ အဆိုပါ နှစ်ကောင်လုံးဟာ ငယ်ငယ်လေးကတည်းက မွေးမြူရေးခြံထဲမှာ အတူတူကြီးပြင်းလာတဲ့ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နေ့ကျတော့ Muniandiraja...
ကမ္ဘာမှာအရှားဆုံး ကျောက်မျက်ရတနာဟာ မြန်မာပြည်ကထွက်တဲ့ ပိန်းနိုက် Painite ပါ။ 2016 ခုနှစ်ကရေးခဲ့တာမို့ အချက်အလက် အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါတယ်။ memory တက်လာတာတွေ့လို့ ပြန်ရှယ်လိုက်တာပါ။ ဘာကြောင့်အရှားဆုံးလဲဆိုရင် ၁၉၇၉ အထိ တကမ္ဘာလုံးမှာ ၂ လုံးပဲရှိပါသတဲ့။ အခုအထိ ရှားမှန်းသိလို့ ရှာတာတောင်မှ တကမ္ဘာလုံးမှာ ၂၆ လုံးပဲရှာတွေ့သေးပါတယ်။ ဘယ်ကထွက်သလဲဆိုရင် မြန်မာပြည်ကပဲထွက်တယ်လို့ယူဆထားပါတယ်။ ဘာကြောင့် ပိန်းနိုက်လို့ခေါ်သလဲ။ မစ္စတာပိန်း A.C.D. Pain ဟာ မြန်မာပြည်ကဝယ်ခဲ့ပြီး ၁၉၅၄ မှာ British Museum ကိုလှုတော့မှ ကမ္ဘာမှာ အရှားဆုံးကျောက်အဖြစ်စသိပြီး Painite လို့ Mr. Pain ကိုဂုဏ်ပြုခေါ်တာပါ။ ပိန်းနိုက်တခုခြင်း ရာဇဝင်ပြောရင်ရှည်မှာစိုးလို့ အနည်းအကျဉ်းပဲပြောပါရစေ။ ပိန်းနိုက် ၄ ဟာ ၂၀၀၁ မှာတွေ့ပြီး အခု US National Museum, Smithsonian Institute မှာရှိပါတယ်။ ပိန်းနိုက် ၅...